Black Magic: Stardock Window Blinds v8.02 For Windows7, 8 (46.55 MB) + Activator
Stardock Window Blinds v8.02 For Windows7, 8 (46.55 MB) + Activator
Posted by Black Magic | Posted in Computer Softwares , Window အလှဆင်ရန် | Posted on 7:47 PM
အခုတစ်ခါမှာတော့ မိမိကွန်ပြူတာ တစ်ခုလုံးကိုအလှဆင်ပေးမယ့် Software လေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလိုပါ တယ်ဗျာ။ Android အတွက် တွေဘဲအလှဆင်တာတွေ တင်ပေးနေတာများတော့ အခု PC ဘက်ကို ပြန်လည့် တာပါ။ သူ့ရဲ့ Skin လေးကတော်တော်လေးလှပါတယ်ဗျာ။ နမူနာအနေနဲ့အောက်မှ ပုံတွေပြထားပါတယ်။ Support လုပ်နိုင်တဲ့ OS တွေကတော့ Windows 7/8 and Windows Server 2008 R2/2012. အားလုံးမှာအလုပ် လုပ်ပါတယ်။ XP မှာတော့ မရပါဘူးဗျာ။ အမြဲတမ်းသုံးနိုင်အောင် Trial Reset ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြု လုပ်ပုံကလည်းလွယ်ပါတယ်။ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါဦး။
1. "Stardock WindowBlinds 8.02". ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။
2. ပြီးသွားရင်တော့ သူ့ကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ မ Run ပါနဲ့ဦး။
3. "Trial Reset.exe" ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပြီးသွားရင် "Auto Reset" ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Full Version ဖြစ် သွားပါပြီ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..၊
Credit To Pyae Phyo (MMiTD)